» छोराको दुबै मिर्गौला फेल छ, आरन छेउको तातो अनि हतौडा चलाउनु रहर होइन !
छोराको दुबै मिर्गौला फेल छ, आरन छेउको तातो अनि हतौडा चलाउनु रहर होइन !
८ जेष्ठ २०७७, बिहीबार २०:३५
मकवानपुर । काभ्रे जिल्लाको धाप्लेमा २०१२ सालमा जन्मिएका जन्मिएका हस्तबहादुर बिकले हेटौडा उपमहानगरपालिकामा फलामे औजार बनाउने काम गर्दै आइरहेका छन् ।
हेटौडा बजारबाट ७ किलोमिटर पुर्वतर्फ रहेको चौघडाको विद्यानगर स्थित रानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिती जाने बाटोबाट केहीपर मकवानपुरगढी गाउँपालिका जाने फेदीमा कुटो, कोदालो, हँसिया, चुलेसीलगायत फलामका औजारहरु बनाउने काम मै उनी व्यस्त देखिन्छन् ।
जाडोयामको चिसो सिरेटो होस् या गर्मीको तातो, आरनमा बलिरहेको आगोको रापसङ्गै हतौडी ठटाउदै दैनिकी चलाई रहेका हस्त बहादुरलाई उनकी श्रीमती बालकुमारी विकले पनि भाति घुमाएर सघाउने गरेकी छिन् ।
गरिबीको पिडा अनि आरनको तातोलाइ सहन गर्दै हतौडा चलाएर दैनिकी ५/६ सयदेखि १५ सयसम्म कमाउन सक्ने दिन स्मरण गर्दै हिले कोरोनाको महामारीले गर्दा त्यो पनि सकिएको हस्तबहादुर बताउँछन् ।
गाउँघरबाट काम लिएर आउनेको संख्यामा कमि भएपछी २/३ सय पनी कमाउन नसकेका कारण खानै नपुग्ने स्थिति आइपरेको उनले दुखेसो पोखे ।
२०३२ सालमा विवाह बन्धनमा बाधिएपछि जिम्मेवारी थपिएर मकवानपुरको फापरबारी हुँदै हेटौडा आएर कामलाई उनले निरन्तरता दिए ।
गरिब हुनु अति नार्कीय जिवन भएको महसुस भएता पनि दुई छाक टार्नका लागि सधै इमान्दारी पुर्वक काम गरिरहेको र उमेरले सकस पार्ने समय नजिक आउँदै गर्दा पनी जीवन संघर्ष हो भन्दै उनले आफुले जानेको सीप प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सनासो र हटौडा चलाउदै कठिन परिश्रमका साथ काम गरिरहदा छेउमै बसेर श्रीमतीले आरनको भाती घुमाएर सहयोग गर्दा काममा केहि सहज भएको बताएका हुन् ।
बिहानीको मिर्मिरेदेखी बेलुकी घाम नअस्ताउदासम्म आरनमा बसेर बलेको आगोमा फलामका विभिन्न औजार बनाउका लागी काम गरिरहदा श्रीमतीले सहयोग गर्दा कामका लागि हौसला आउने गरेको हस्तबहादुरले बताए।
श्रीमानकै छेउमा बसेर आरनको भाती घुमाउदै गरेकी श्रीमती बालकुमारी बिकले माइती छोडेर आएपछि जिम्मेवारी सम्झिएर श्रीमानलाइ सघाउने गरेको सुनाईन ।
विगतको रितीका अनुसार १४ वर्षको कलिलो उमेरमा पराइको जिम्मा लगाएर पठाएपछि सुखदुखमा यात्रा गर्दै आफू ६३ वर्षको भएको सुनाईन ।
आफ्नो समयमा छोरी चेली कतै जान नहुने कसैसंग बोल्न नहुने र कडा नियमको पालन गर्नुपर्ने दिनलाई सम्झदै छोरा बुहारी नातीनातिनी गरि ९ जना परिवार भएको र श्रीमानले गरेको कमाइमा जिवन चलिरहेको बताइन ।
श्रीमान श्रीमती दुबैले एक अर्काको ध्यान दिनुपर्ने काममा हातेमालो गर्ने देखि विश्वाश गर्न जरुरी हुनुपर्ने र परिवार पनि स्वस्थ रहेमा मात्र आनन्द हुने बताउदै केहि खुसीहरू पाइएपनि माइलो छोरा गोपीलाल बिक रोगी भएका कारण पिरोलिएको बताइन ।
आफ्नो छोराको २ वटै मिर्गौला फेला भएको छ आरनको टुकटुकले २ छाक टार्नै समस्या छ बनाएको घरको पनि ऋणैऋण छ औषधी खुवाउनलाई धौधौ परेको बताए । छोराको मिर्गौला फेरेर उपचार गर्न नसकेका उनीहरुले छोरा भन्दा पहिला आफै मर्न पाए हुने भन्दै गहभरी आँसु पारे ।
बालकुमारीले आँखाको आँसु पुछ्दै भनिन ,आरनको तातो छेउमा बसेर कम गर्नु रहर मात्र नभएर बाध्यता भएको र दुइ छाक टार्न समस्या नै समस्या भोगेका छौ। दुइ छोरा दुइ छोरीको बाबु भएका छोरा बिरामी हुदा सहन गारो परेको र औषधि खानका लागि मात्र मासिक ५ हजार खर्च लाग्ने भएका कारण निक्कै समस्या परेको छ कमाइपनी भने जस्तो छैन मात्र बाँचेका छौ ।
बिरामीको मोबाईल नम्बर ९८०३२४५४०७